Madaxdi ciidamada Ahlu suna oo ka baxay Dhusomareeb |
Madaxdi ciidamada Ahlu suna oo ka baxay Dhusomareeb
buy Kamagra Flavored, Zoloft reviews. Wararka ka imaanaya Magaalada Dhuuso Mareeb ee xarunta Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in halkaasi ay isaga baxeen inta badan saraakiishii Kooxda Ahlu Sunna Waljameeca ee kusugneed Magaaladaasi.
Dadka deegaanka ayaa ku waramaya in xubno katirsan Hogaanka Ahlu Sunna iyo ciidamo badan ay wateen ay ka baxeen Degmada Dhuuso Mareeb, waxaana warar soo baxaya sheegayaan in ay aadeen dhinaca Degmada Guriceel.
Wararka kale ee laga helayo Magaalada Dhuuso Mareeb ayaa sheegaya in saraakiisha Ciidamada Itoobiya ay shalay kulan la qaateen Hogaanka Ururka Ahlu Sunna Waljameeca ee ku sugnaa Magaalada Dhuuso Mareeb.
Warar soo baxaya sheegaya in Saraakiisha Ciidamada Itoobiya ee ku sugan Magaalada Dhuuso Mareeb kulanka kadib ay ku amreen saraakiisha Kooxda Ahlu Sunna in ay hubka dhigaan kuna biiraan Maamulka Galmudug.
Ma jiro wali wax war ah oo kasoo baxay saraakiisha Ahlu Sunna ee ka baxay Degmada Dhuuso Mareeb, waxa ayna arintan kusoo aadeysaa xili Gobolka Galgaduud Degmooyin iyo deegaanp katirsan ay ka jiraan dhaq dhaqaaqyo ciidan oo u dhaxeeya Kooxda Ahlu Sunna iyo Maamulka Galmudug.
Ciidamo kala taageersan Ahlu Sunna iyo Maamulka Galmudug ayaa hada isku hor fadhiya deegaano katirsan Gobolka Galgaduud, waxaana jirt